FAHAFATESANA FAHAFATESANA PLASTIK
Hatramin'ny niorenany tamin'ny 2002
Plastika mitana fanamoriana plastika plastika
Plastika fanosihosana boribory vita amin'ny plastika
Plastika vita amin'ny tady plastika
Plastika volo vita amin'ny volo synthetika plastika
Plastika vita amin'ny landihazo vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika
Plastika vita amin'ny makiazy vita amin'ny plastika
Plastika vita amin'ny plastika amin'ny borosy nify
Masinina milina fitotoana filokana fiarovana
Masinina fitotoana fanoratana plastika
Plastika fanodinana filokana Nylon
Plastika vita amin'ny plastika PET PET
Sarin'ny mpanjifa & Fampirantiana
Plastika fanodinana ny fako plastika plastika dia ampiasaina amin'ny famokarana PET, PP, PE monofilament izay ampiasaina amin'ny fanamboarana efitrano fidiovana plastika samy hafa ho an'ny fampiasana indostrialy sy ny sivily.
Plastika vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika dia fantatra amin'ny masinina famokarana plastika monofilament plastika amin'ny karazana borosy samihafa ho an'ny fampiasana indostria sy ny fampiasana sivily. Mora ny asan'ny lisitry ny milina ary avo lenta ny mari-pahaizana otomatis, dia raisina an-tsena eran-tany.
Plastika vita amin'ny fantsom-bolo plastika dia lalana famokarana mandeha ho an'ny PET, PP, PE monofilament izay ampiasaina amin'ny famokarana vokatra vita amin'ny plastika plastika isan-karazany.
Plastika vita amin'ny volo vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika dia famokarana ho an'ny PET synthetic, PP volo wig fibre izay ho vokarina amin'ny endrika volo isan-karazany, vokatra wig.
Plastika PBT synthetic monofilament extruding dia malaza amin'ny famokarana fibre artifisialy ho an'ny eyelashes sandoka mandeha ho azy. Noho ny famokarana filam-bolongana sandoka ambony kalitao avo lenta, dia ao anaty toerana ambony indrindra ity lisitry ny milina ity.
Plastika PBT PET kosmetika filament extruding machine line dia ny famokarana monofilament avo lenta izay ampiasaina hanamboarana makiazy, makiazy, borosy mpanakanto, vokatra vita amin'ny borosy.
Plastika extruding plastika vita amin'ny plastika dia ampiasaina betsaka amin'ny famokarana PBT, PA nylon, ny monofilament PP ho an'ny vokatra vita amin'ny borosy.
Plastika fanosihosana vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika dia afaka mamokatra fitaovana vita amin'ny synt synt synthes isan-karazany ho an'ny fanamboarana loko samihafa amin'ny loko. Ireo fitaovana ireo dia PBT, PET ary PA Nylon.
Plastika milina fiarovana filamatra mamatsy plastika an'ny orinasanay dia ny famokarana PE avo lenta, monofilament PET ho an'ny harato fiarovana, harato famonoana bibikely, vovoka famonoana bibikely, vokatra aloky ny masoandro.
Masinina fanodinana filam-boto plastika azo ampiasaina amin'ny famokarana PE, PA Nylon monofilament izay hampiasaina amin'ny famokarana vokatra harato samihafa.
Plastika fanodinana filamandrika PA Nylon dia ampiasaina betsaka amin'ny famokarana monofilament PA Nylon izay ho ampiasaina amin'ny fanaovana vokatra isan-karazany, toy ny borosy nify, ny borosy hosodoko, ary ny borosy maro isan-karazany, harato fanondranana avo lenta, valalan'ny sivana, ny tali ny Nylon, tariby an-dranomasina sns.
Plastika tariby vita amin'ny plastika PET dia ampiasaina amin'ny famokarana tariby boribory PET izay ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny fambolena, indostrian'ny famokarana, indostrian'ny fambolena.
Qingdao Zhuoya Machinery Co, Ltd dia orinasa mpahay siansa sy teknolojia mirakitra fahalalana miaraka amin'ny fikarohana sy fampandrosoana, fanodinana, varotra sy serivisy
Pingcheng West Road, Jiaoxi Industrial Zone, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, Sina